Lohahevitra Top Adsense: Ajax, Flash, WordPress ary Firefox | Martech Zone
Lohahevitra Top Adsense: Ajax, Flash, WordPress ary Firefox
Alarobia, Desambra 27, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Roa herinandro lasa izay, natambatra aho Adsense miaraka amin'i Google Analytics (Torohevitra # 4). Efa variana aho mijery ny valiny. Google Analytics dia manana Reverse Goal Path izay ahitanao ny làlana nampiasan'ny mpitsidika alohan'ny tsindrio ilay doka. Miaraka amin'ity fampahalalana ity, ny iray dia mety hanana fomba fijery roa samy hafa:
Afaka mahazo vola bebe kokoa aho raha manohy manoratra momba ireo lohahevitra ireo.
Misy ny fangatahana atiny amin'ireto faritra ireto - hany ka vonona ny tsindry ny dokam-barotra amin'ny dokambarotra hahazoana izany!
Roa herinandro monja amin'ny famakafakana eo ambany fehikibo ataoko dia tsy hanova ny lalana amin'ny atin'ny bilaogiko fotsiny aho mba hahazoana vola miditra amin'ny doka fanampiny. Saingy… toa hitan'ny olona ny bilaogiko ary avelany amin'ny alàlan'ny rohy dokambarotra rehefa tsy mahita ny vaovao ilainy amin'ny lohahevitra tadiaviny izy ireo. Ity misy fijery mahafinaritra momba ny statistika miaraka amin'ny Reverse Goal Path:
Ireo lohahevitra ireo? Ajax, Flash, WordPress ary Firefox. WordPress dia iray amin'ireo lohahevitra 'mafana' ao amin'ny bilaogiko miaraka amina lohahevitra marobe amin'ireo lohahevitra voamarika amin'ny WordPress fa tsy amin'ny toerana hafa. Miasa amin'ny Widget Sidebar WordPress aho dieny izao satria irina ireo ary mety hampiseho ny bilaogiko amin'ny mpamaky fanampiny.
Raha ny Ajax, Flash ary Firefox… dia tsy maintsy ho hitako izay tiako hitondrana ireo. Mpankafy Ajax goavambe aho fa tsy manana traikefa amin'ny Flash (manana namana betsaka kokoa i Bill namako). Ary mazava ho azy tiako ny Firefox, teknolojia fanampiny izy io, ary Firebug! Firebug dia ny fitaovana fampivoarana tena ilaina ho an'ny mpamorona tranonkala.
Ka… manorata momba ireo lohahevitra ireo hamaly ny tinady ary afaka mahazo vola bebe kokoa ianao amin'izany! Tsara ny Analytics!
Mikaroka ireo hafatra bilaogy miaraka amin'i Technorati
13 Nov 2008 tamin'ny 6:48 PM
Manana tranokala flash aho
mitady ny script izay mampiseho google adsense amin'ny flash aho.
ahoana no ahazoako azy?
17 Nov 2008 tamin'ny 2:23 PM